Citizen Investment Trust(Citizen Investment Trust) in Bizshala: Business, economic and financial news of Nepal -
नागरिक स्टक डिलरले बजारमा लगानी सुरु गरिसकेको खुलासा, आईपीओ पनि जारी गर्ने
काठमान्डौ । बहुप्रतिक्षित नागरिक लगानी कोषको सहायक कम्पनी नागरिक स्टक डिलर कम्पनी लिमिटेडले सेयर बजारमा लगानी गर्न थालेको खुलासा भएको छ। कम्पनी स्थापना भएदेखि धितोपत्रमा लगानी गर्न सुरु गरिसकेको स्टक डिलरकै एक अधिकारीले खुलासा गरेका हुन्। यद्यपि ती अधिकारीले हालसम्म के–कति लगानी गरिसकेको भन्नेबारे भने खुलाएनन्। त्यसो कम्पनी...
सीआईटीको हकप्रद आजबाट बिक्री खुला, कहाँ–कहाँबाट आवेदन दिन सकिन्छ ?
काठमाण्डौ । नागरिक लगानी कोष (सीआईटी) ले हकप्रद सेयरमा आज मंगलबार (पुस २८ गते) बाट आवेदन खुला गरिएको छ। कोषले १ः०८२८४ को अनुपातमा हकप्रद निष्कासन गरेको हो। कोषको हाल कायम चुक्तापुँजी १ अर्ब ६४ करोड ७ लाख ४० हजार ८०० रुपैयाँको एक सेयरबराबर नयाँ ०।८२८४ निष्कासन गरेको छ। १०० रुपैयाँ अंकित दरका १ करोड ३५ लाख ९२ हजार ५९२ कित्ता हकप्रद सेयरमा...
नागरिक पेन्सन योजनाको अनलाइन रजिस्ट्रेसन सेवा सुरु
काठमाण्डौ । नागरिक लगानी कोषले नागरिक पेन्सन योजनाको अनलाइन रजिस्ट्रेसन सेवा सुरु गरेको छ। अनलाइन रजिस्ट्रेसन सेवाको सुरुआतसँगै यसमा सहभागी हुन चाहनेले कोषको कार्यालयमा आउन नपर्ने भएको छ। यसका लागि योजनामा सहभागी हुनका लागि http://nlk.org.np/home मा गएर Eservice मा गएपछि New-E-service login पश्चात Ragister For Penson Yojana मा गई वा https://eservicenew.nlk.org.np/Portal/Schem...
भोलिबाट सीआईटीको हकप्रदमा आवेदन खुल्ने, कहिलेसम्म कायम सेयरधनीले भर्न पाउने ?
काठमाण्डौ । नागरिक लगानी कोष (सीआईटी) ले हकप्रद सेयर भोलि पुस २८ गतेबाट निष्कासन हुँदैछ। कोषले १ः०८२८४ को अनुपातमा हकप्रद निष्कासन गर्न लागेको हो। कोषको हाल कायम चुक्तापुँजी १ अर्ब ६४ करोड ७ लाख ४० हजार ८०० रुपैयाँको एक सेयरबराबर नयाँ ०.८२८४ निष्कासन हुनेछ। १०० रुपैयाँ अंकित दरका १ करोड ३५ लाख ९२ हजार ५९२ कित्ता हकप्रद सेयर कोषले...
सीआईटीले आजबाट राख्यो ७५ हजार कित्ता सेयर लिलामीमा
काठमाण्डौ । नागरिक लगानी कोष (सीआईटी) ले सीबीआईएल क्यापिटल लिमिटेडमा रहेको आफ्नो स्वामित्वको संस्थापक सेयर आज बिहीबार लिलामीमा राखेको छ। कोषले सीबीआईएलमा रहेको आफ्नो स्वामित्वको ७५ हजार कित्ता सेयर लिलामीमा राखेको हो। यो लिलामी सेयरमा विद्यमान संस्थापकधनीसहित योग्य जोकोही व्यक्ति, कम्पनी वा संघसंस्थाले बोलपत्र पेस गर्न �...
नागरिक लगानी कोषले रु. १० अर्ब बैंकहरुमा लगानी गर्ने
काठमाण्डौ । नागरिक लगानी कोषले १० अर्ब बढी रकम ‘क’ वर्गका बैंकमा लगानी गर्ने भएको छ। कोषले मुद्दति निक्षेपका रुपमा बैंकहरुमा १० अर्ब ४ करोड ९८ लाख ४४ हजार रुपैयाँ लगानी गर्ने भएको हो। यस्तो लगानी १ वर्षदेखि २ वर्षसम्मको हुने कोषले जनाएको छ। इच्छुक बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुलाई आफूले लिन चाहेको रकम, ब्याज र ब्याज भुक्तानी गर्ने...
हकप्रदका लागि नागरिक लगानी कोषको सेयरमूल्य समायोजन, प्रतिकित्ता कति ?
काठमाण्डौ । हकप्रद सेयरका लागि नागरिक लगानी कोष (सीआईटी) को मंगलबार सेयरमूल्य समायोजन गरिएको छ। नेपाल स्टक एक्सचेन्ज (नेप्से) ले हकप्रद सेयरका लागि कोषको सेयरमूल्य समायोजन गर्दै प्रतिकित्ता २ हजार ७८४ रुपैयाँ कायम गरेको छ। यसअघि कोषको अन्तिम कारोबार मूल्यअनुसार प्रतिकित्ता ५ हजार ८ रुपैयाँ कायम भएको थियो। अब समायोजित मूल्यअनुसार नै...
प्रभु बैंक कर्पोरेट पे प्रणालीमा आवद्ध
काठमाण्डौ । प्रभु बैंक लिमिटेडले आफ्नो संस्थागत ग्राहकहरुका निम्ति बैंक खाताबाटै डिजिटल भुक्तानी गर्न सकिने गरी कर्पोरेट पे प्रणालीको सुरुवात गर्न नेपाल क्लियरिङ्ग हाउस लिमिटेड सँग सम्झौता गरेको छ । उक्त सम्झौता पत्रमा प्रभु बैंक लि.का प्रमुख सञ्चालन अधिकृत रश्मी पन्त तथा नेपाल क्लियरिङ्ग हाउस लिमिटेडका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत...
सीआईटीको हकप्रद पुस २८ बाट निष्कासन हुने, कहिलेसम्म कायम सेयरधनीले पाउने ?
काठमाण्डौ । नागरिक लगानी कोष (सीआईटी) ले हकप्रद सेयर यही पुस २८ गतेबाट निष्कासन गर्ने भएको छ। कोषले १ः०८२८४ को अनुपातमा हकप्रद निष्कासन गर्न लागेको हो। कोषको हाल कायम चुक्तापुँजी १ अर्ब ६४ करोड ७ लाख ४० हजार ८०० रुपैयाँको एक सेयरबराबर नयाँ ०.८२८४ निष्कासन हुनेछ। १०० रुपैयाँ अंकित दरका १ करोड ३५ लाख ९२ हजार ५९२ कित्ता हकप्रद सेयर कोषले...
नागरिक लगानी कोषले हकप्रद निष्कासन गर्न तोक्यो बुक क्लोज मिति, कहिले ?
काठमाण्डौ । नागरिक लगानी कोष (सीआईटी) ले निष्कासन गर्ने भनेको हकप्रदका लागि बुक क्लोजको मिति तय गरेको छ। कोष सञ्चालक समितिको हिजो शनिबार बसेको बैठकले यही पुस १४ गते एक दिनका लागि बुक क्लोज गर्ने निर्णय गरेको हो। यसको अर्थ पुस पुस १३ गतेसम्म कायम सेयरधनीहरु कोषले निष्कासन गरेको हकप्रद सेयरमा आवेदन दिन योग्य हुनेछन्। नेपाल धितोपत्र...
बजार प्रवेशको अन्तिम चरणमा नागरिक स्टक डिलर, सेयर खरिदबिक्री गर्न मिल्ने विन्डोजको परीक्षण सुरु
– भक्तराज रसाइली काठमाण्डौ । धितोपत्र बजारमा प्रवेश गर्ने तयारी गरिरहेको नागरिक लगानी कोषको सहायक कम्पनीका रुपमा रहेको नागरिक स्टक डिलरले आफैँ सेयर खरिदबिक्री गर्न मिल्ने विन्डोजको परीक्षण सुरु गरेको छ। नागरिक स्टक डिलरका सीइओ महेश्वरलाल श्रेष्ठले धितोपत्र बजारमा प्रवेश गर्ने लगभग सबै तयारी पूरा गरी हाल उक्त विन्डोजको परीक्षण...
नागरिक लगानी कोषको ‘पेन्सन योजना’ : को–को सहभागी हुन पाउने ? कति वर्षमा पाइन्छ पेन्सन ?
काठमाण्डौ । नागरिक लगानी कोष (सीआईटी) ले ‘नागरिक पेन्सन योजना’ सञ्चालनमा ल्याएको छ। सीआईटीको यो योजनामा अब आयआर्जन गर्ने तथा प्रचलित कानुबमोजिम स्थापना भएका संघसंस्था एवं प्रतिष्ठानमा कार्यरत श्रमिक, कर्मचारी वा स्वरोजगार रहेका सर्वसाधारण र गैरआवासीय तथा वैदेशिक रोजगारीमा रहेका नेपालीसमेत सहभागी हुन सक्नेछन्। बचतको सीमा कति...
नागरिक लगानी कोषको नाफा २०.६३%ले बढ्यो, ईपीएस कति ?
काठमाण्डौ । नागरिक लगानी कोष (सीआईटी) ले चालु आर्थिक वर्ष २०७७/७८ को प्रथम त्रैमासमा १४ करोड ५९ लाख रुपैयाँ खुद नाफा आर्जन गरेको छ। कोषको आइतबार सार्वजनिक प्रथम त्रैमास वित्तीय विवरणअनुसार समीक्षा अवधिको खुद नाफा गत वर्ष यही अवधिको तुलनामा २०.६३ प्रतिशतले बढी हो। गत वर्ष यही अवधिमा कोषले १२ करोड १० लाख रुपैयाँ खुद नाफा आर्जन गरेको...
सीआइटीको पेन्सन योजनामा देशका जुनसुकै स्थानबाट सहभागी हुन सकिने
काठमाण्डौ । नागरिक लगानी कोषले हालसालै ल्याएको नागरिक पेन्सन योजनामा अब देशका जुनसुकै स्थानबाट पनि इच्छुकले सहभागिता जनाउन पाउने भएका छन् । कोषले सञ्चालनमा ल्याएको नागरिक पेन्सन योजनामा उपत्यकाबाहिरका सहभागीहरुले उक्त योजनामा सहभागी हुन चाहेमा अनलाइनबाटै सहभागी हुनसक्ने भएका हुन् । नागरिक लगानी कोषका केन्द्रीय कार्यालय...
सीआईटीले बैंकहरुमा रु. १४.७६ अर्ब लगानी गर्ने, ब्याजदरसहित प्रस्ताव पेस गर्न आह्वान
काठमाण्डौ । नागरिक लगानी कोष (सीआईटी) ले बैंकहरुमा पौने १५ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी लगानी गर्ने भएको छ। कोषले बिहीबार सूचना प्रकाशित गर्दै १४ अर्ब ७६ करोड २५ लाख रुपैयाँ बैंकहरुमा मुद्दति निक्षेपका रुपमा लगानी गर्ने जनाएको हो। कोषले यसका लागि नेपाल राष्ट्र बैंकबाट इजाजतपत्र प्राप्त ‘क’ वर्गका बैंकहरुलाई आफूले लिन चाहेको रकम, ब्याजदर र...
राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकले डाक्यो वार्षिक साधारणसभा, अजेन्डाहरु यस्ता छन्
‘एसीडी राष्ट्रहरुबीच क्षेत्रीय र अन्तरदेशीय सम्पर्क सुधार गर्नु आवश्यक’
छ्याङ्दी हाइड्रोपावरले पायो इक्रा रेटिङ
सामाजिक सञ्जालदेखि ब्रोकर हाउससम्म नेपाल लाइफकै चर्चा, मूल्य अझै कति पुग्ला ?